ဒီတစ်ခါ Iron Cross ရဲ့ နာမည်အကြီးဆုံး ကိုလေးဖြူ၏ Album များကို စုစည်းပြီး သီချင်းပေါင်း 100ကျော် ကိုလည်း စုစည်းပေးလိုက်ပါတယ်။ ကိုလေးဖြူ၏ ပရိသတ်များကို ရည်ရွယ်ပါသည်။
ရေးသားသူ Tea at 7:02 PM
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။ ဂီတကိုခုံမင်ပါတယ်။ အခုလိုစုစည်းပေးတာ ကျေးဇူးတင်တယ်ဗျာ။
Thanks for your own idea , may GOD BLESS you.
သီချင်းတွေ က ရှာမတွေ့ ဘူး..
help me plz.!